“Champions League waa khamaar… Adrien Rabiot ma ahan sida Messi oo kale” – Michel Platini – Gool FM
“Champions League waa khamaar… Adrien Rabiot ma ahan sida Messi oo kale” – Michel Platini
Dajiye July 3, 2019
(Yurub) 03 Luulyo 2019. Madaxweynhihii hore xiriirka kubadda cagta Yurub “UEFA” ee Michel Platini ayaa sheegay inuusan waxba kala soconin mustaqbalka Paul Pogba iyo hadii uu ku laaban doono kooxda Juventus.
Paul Pogba ayaa u soo ciyaaray kooxda Juventus inta u dhexeysay 2012 ilaa iyo 2016, laakiin wuxuu u wareegay Manchester United, seddex sano ka dibna waxaa lala xiriirinayaa inuu markale ku laabanayo magaalada Turin, ama ay jirto suutogalnimo uu ugu dhaqaaqi karo Real Madrid.
Hadaba Michel Platini oo ka hadlayay mustaqbalka xiddiga khadka dhexe reer France ee Paul Pogba ayaa yiri:
“Wuxuu ka tagay Juventus lakiin ma aqaano haddii uu ku soo laabanayo”.
“Matthijs de Ligt? Hadii aan daacada ka hadlo, 70, 100 ilaa iyo 200 milyan oo euro ayaa ah tiro aan macno lahayn, Waxaad ku iibsaneysaa hal shaqsi lacago badan, waxaadna weyn doontaa kaddib 4 sano”.
Intaaas kaddib Michel Platini ayaa ka hadlay heshiiska uu Adrien Rabiot ugu biiray kooxda reer Talyaani ee Juventus, kaddib markii uu soo idlaaday qandaraaska uu ku joogay PSG.
“Wuxuu ka badan yahay ciyaaryahan, laakiin isagu ma ahan Messi, balse wuxuu ku raaxeysanayaa tayadiisa ciyaareed, Adrien Rabiot wuxuu ka ciyaaraa boosas badan, mana ka caajiso inuu tago dhanka daafaca iyo weerarka si uu u raadiyo gool, PSG waxay qalad ku sameysay inay iska iibiso”.
Michel Platini ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo xiray suurtogalnimada ay kooxda Juventus ugu guuleysan karto koobka Champions League xili ciyaareedka cusub wuxuuna yiri:
“Waxay ahayd bilow wnaaagsan sanadkii hore, laakiin koobabka waa sida khamaarki oo kale, waxaad ku seegi kartaa 10 daqiiqo, oo wax walba ayaad ku guuldareysaneysaa”.
Mino Raiola oo ka shaqeynaya sidii uu Real Madrid cadaadis ugu saari lahaa iney la wareegto Paul Pogba.